Afrika manomana ny Diabe Eran-tany - Ny Martsa Manerantany
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Afrika manomana ny Diabe Eran-tany
Taorian'ny nandaozany ny 2 tamin'ny volana Oktônan'ny 2019 tao Madrid, ny Martsa dia handeha ho any Atsimo atsinanan'i Espaina ary tonga any amin'ny kaontinanta Afrikana, miditra ny 8 tamin'ny volana Oktobra ka hatrany avaratr'i Maraoka.
Ny kontinenta Afrikana dia miomana amin'ny Diabe ho an'ny Fandriam-pahalemana sy ny tsy Fahampiana.
Maro ireo firenena efa manomana ny hampiantrano ny ekipa fototra izay hanasongadina ny hetsika ataony
Any Afrika Andrefana
Any Afrika Afovoany
Any Afrika Atsinanana
Misy ihany koa ny tetikasa hahatsikaritra ny mariky ny fanehoana an'ohatra ny olombelona amin'ny 20.000 ao Chimoio
Nandritra ny fitsidihanay tamin'ny Martsa sy Mey, fivoriana maromaro no natao:
Ao amin'ny faritra atsinanana ao amin'ny University of Oujda ary Fez miaraka amin'ny solontenan'ny sendika ary fikambanana.
Tao Casablanca, nihaona tamin'ireo solontenan'ny fikambanana sy mpianatra izahay.
Miandry ny fanatanterahana ny hetsika, ireo tanàn-dehibe ankehitriny dia heverina fa Tangier, Casablanca ary Tarfaya.
Afaka nanampy azy ireo i Fez sy i Agadir.
Misy hetsika kasaina hatao ao Tenerife, Las Palmas ary Lanzarote amin'ny 15 mankany amin'ny 19 amin'ny volana Oktobra.
Ny andro 15 ao amin'ny Oniversiten'i La Laguna miaraka amin'ny Forum na Mpanohana ny fanabeazana ho amin'ny fandriampahalemana.
Ilay horonantsary "Ny fototry ny faran'ny fiadiana niokleary".
Ny volana oktobra 16 dia hiakatra ny tampon'ny Teide (3.718 m.) Mba hitondra ny sainan'ny March 2ª.
Ny andro manaraka dia hetsika atao mifantoka amin'ny sehatra fanabeazana sy rafitra ao Lanzarote sy Las Palmas.
Ny fiaraha-miasa amin'ny mpikambana ao amin'ny MSGySV ao Nouakchott dia nanamora ny fivoriana niaraka tamin'ireo solontenan'ny sampana:
Filohan'ny kaomisiona nasionaly momba ny zon'olombelona.
Pdte an'ny Federasiona Nasionaly Basketball.
Filohan'ny fiaraha-monina Urban of Nouakchott.
Ny rehetra dia naneho ny fanohanany sy ny fanoloran-tenany tamin'ny MM.
Ary koa ireo fikambanana tanora tanora maro sy nanao ny asan'ny tontolon'ny akademika sy ny zon'olombelona.
Vokatr'izany, niforona ny ekipa mpanohana ny Nouakchott, ahitana mpanolotsaina samihafa 6.
Nisy vondrona WhatsApp Maoritania noforonina.
Ity ekipa ity dia efa nitazona fivoriana 3 ary nikarakara hetsika fanentanana voalohany:
Ho an'ny Ramadan, ny fanatanterahana ny Ftour (fandikana ny fifadian-kanina) noho ny tsy fisian'ny herisetra eo amin'ny kianja malalaka.
Farany, raha oharina amin'ny lalana EB, dia hita ho làlana ny lalana mankany Nouadhibou, Boulenouar, Nouakchott ary Rosso.
Nandritra ny fitsidihanay tamin'ny May, dia nivory izahay:
Solontenan'ny sekoly iray miaraka amin'ny mpianatra 3000 sy ny tale lefitra.
Mpikambana ao amin'ny Sekoly Federaly Soccer.
Fihaonana niaraka tamin'ny mpitarika ny Foiben'ny Afrikana misahana ny zon'olombelona, ​​(izay efa nikarakara diabe ho an'ny vehivavy manerana ny firenena).
Nafana fo avokoa ny rehetra ary niaraka tamin'ny sary mba hanomanana ny tany ho an'ny 2MM.
Ny fivoriana fandrindrana voalohany dia efa nisy ary efa voafaritra izao manaraka izao:
Ireo hetsika oktobra 2 toy ny fandefasana horonantsary momba ny Gandhi na lahateny.
Manomboka amin'ny Oktobra 26 hatramin'ny Novambra 1 dia misy hetsika samihafa manerana ny toerana samihafa ao amin'ny firenena sy distrika ao Dakar.
Ny vondrona humanist Herinandro ho an'ny Zon'olombelona ao amin'ny distrikan'i Pikine dia mikasa ny hanao Forum.
Nisy vondrona XUNXM iray antsoina hoe Sunugal noforonina.
Manantena ny hampivelatra ny fahafahana any amin'ny tanàna hafa tahaka an'i Saint-Louis sy Thiès.
Manaova koa ny faritr'i Casamance raha mieritreritra ny mety amin'ny lalana akaiky:
Isika dia eo amin'ny sehatry ny fampiroboroboana ary manangona fifandraisana amin'ireo olona sy vondrona izay nanohana ny March 1ª.
Ny fahafahana vaovao ihany koa dia misokatra.
Ny fialan-tsasatry ny ekipam-pirenena manohana ny fitetezam-paritra Afrikana Andrefana dia hivoaka amin'ny 4 ny volana Novambra avy any Dakar mankany Amerika.
Hatramin'izay, hisy ny làlana iray amin'ity kalandrie ity:
Avy amin'ny 8 hatramin'ny Oktobra 14 Maraoka.
14 mankany amin'ny Nosy Canarona 18.
19 mankany 24 Maoritania.
Avy amin'ny 24 ka hatramin'ny Senegaly 4 XNUMX.
Ny komity fampiroboroboana sy fanentanana dia mitohy ...
Ary izy ireo dia mifandray amin'ny fikambanana sy ny sehatra tsy miankina na fanjakana na fanjakana
Natao ny hanaovana baolina kitra.
Ary koa, manomana fotoam-pialan-tsasatra any an-tsekoly miaraka amin'ny hafatra momba ny fandriampahalemana sy ny fitsipiky ny hetsika tsy misy herisetra.
Ny fifampiraharahana dia mifampiraharaha amin'ny:
Filohan'ny fikambanan'ny RFI ao Bénin.
Ny Kianja Mena any Bénin sy ireo fikambanana hafa.
Ny fifandraisana dia mitazona amin'ny vondron'olona manan-danja sy amin'ny tambajotra Ben'ny tanàna ho an'ny fandriampahalemana ao Afrika.
Andro 2 tany Abidjan - Cocody no hetsika hanombohana ny Martsa.
Ny 15 tamin'ny Oktobra tao Bouaké, foiben'ny firenena, ary ny 28 tamin'ny Oktobra tany Korhogo, any avaratry ny firenena.
Ny 1 ny volana Novambra, delegasiona ivoariana dia handeha ho any Dakar hiarahaba ny ekipa fototra.
Ireo mpikambana ao amin'ny MSGetSV dia manandrana manangana hetsika na dia eo aza ny olana ara-toekarena sy ny toe-draharaha ankehitriny eo amin'ny herisetra ara-tsosialy sy ara-politika ao amin'ny firenena.
Mandroso tsikelikely ny tetikasa noho ny olana ara-nofo.
Ny mponina ao an-tanànan'i Lubumbashi, Likasi ary Mbuji-Mayi dia efa voamarina.
Ambonin'ny zava-drehetra, eo amin'ny sehatry ny sekoly.
Any Lubumbashi dia mahita pasitera sy mpihira ny mahita ny fomba hanatonana ny tetikasa.
Misy diabe sy fihaonambe ho an'ny fandriampahalemana ao Abuja.
Misy ihany koa ny hevitra hoe manangana zaridaina ho an'ny fandriampahalemana sy ny fisaintsainana ao an-tanànan'i Benin sy ny diabe any Lagos.
Nisy ekipa noforonina Mozambika mba handrindra lalana vaovao.
Hanohy ny andro 31 izy io, nanomboka tamin'ny 18 ny volana Novambra hatramin'ny 20, avy amin'ny firenena valo:
Etiopia, Kenya, Oganda, Zambia, Zimbaboe, Mozambika ary Afrika Atsimo, hanohy ny ho any Buenos Aires.
Ny hevitra dia ny mandamina hetsika ho an'ny daholobe any amin'ny firenena tsirairay.
Amin'izany, ireo filoham-panjakana samihafa dia hasaina hanolo-tena ho an'ny daholobe ho an'ny fandriampahalemana.
Misy ihany koa ny tetikasa hanatanterahana izany Ny marika lehibe indrindra ho an'ny olombelona momba ny fandriampahalemana amin'ny vahoaka 20.000 ao Chimoio
Hevitra iray hafa ny fandraisana anjara amin'ny seranam-piaramanidina izay mitondra ny mpikambana amin'ny volana Martsa:
Azon'izy ireo atao ny mampahafantatra ireo mpandeha amin'ny fizarana taratasy kely amin'ny 2MM.
Na eo aza ny fahasarotana ara-toekarena, ara-piaraha-monina ary ara-politika, ny tsirairay amin'izy ireo dia miezaka ny handray anjara amin'ilay tetikasa.
Koa raha te-hiara-miasa sy hanohana ireo hetsika efa efa eny an-dalana ianao, dia afaka manao izany amin'ny fanamorana ny fifandraisana amin'ny olona, ​​olona na fikambanana tsy miankina avy amin'ireo firenena voatonona na avy amin'ny firenen-kafa amin'ny adiresy mailaka manaraka >>>>theworldmarch.org
Martine SICARD, tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana an'i Afrika amin'ny 2MM
Raha mila fanazavana fanampiny dia soraty amin'ny info@theworldmarch.org na mitsidika ny tranonkala: theworldmarch.org
Hetsika ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana any Montreuil
Fotoana tsara hizarana ao Fiumicello
Andao hanangana fandriam-pahalemana any amin'ireo tanànan'izao tontolo izao isika